विवाहपछि दम्पतीको व्यवहार किन फरक ? |
Home जीवनशैली विवाहपछि दम्पतीको व्यवहार किन फरक ?
विवाहपछि दम्पतीको व्यवहार किन फरक ?
नवविवाहित जोडीमाथि गरिएको एक सर्वेक्षणबाट अनेकौं रोचक तथा अचम्मलाग्दा तथ्य बाहिर आए । त्यसमा भनिएको छ- यो अनुसन्धानबाट थुप्रै अचम्मलाग्दा कुरा बाहिर आए, जसबाट नवविवाहित जोडीमा परस्परको प्रेम कुन हदसम्म आवश्यक हुन्छ भन्ने थाहा पाइन्छ ।
महिलाका तुलनामा पुरुषलाई जीवनसाथीबाट स्नेहको चाहना बढी हुन्छ । विवाहपछि श्रीमती आफ्ना श्रीमानले विवाहअघि भएका सबै खराब आचरणको त्याग गरून्, कुनै कुरामा बेखुसी नबनून् र आफ्नो कुरा ध्यानपूर्वक सुनून् र आफ्नो तारिफ गरिदिऊन् भन्ने चाहन्छिन् । श्रीमान् पनि श्रीमतीलाई उनले गरेभन्दा बढी प्रेम गर्न चाहन्छ ।
ऊ के पनि चाहन्छ भने आफ्नी श्रीमती अरूका श्रीमतीका तुलनामा आकर्षक देखियोस् । कुनै पनि श्रीमान् आफ्नी श्रीमतीलाई अन्य महिलाभन्दा स्मार्ट बनाउन चाहन्छ । थकित-थकित, कान्तिहीन तथा पीडाले सताएजस्ती देखिने श्रीमती कुनै पनि श्रीमानको सपनामा आउँदैनन् ।
तसर्थ हरेक श्रीमान् जीवनसाथीलाई हरहमेशा तरोताजा एवं चुस्तदुरुस्त देख्न चाहन्छन् । विवाहपछि तुरुन्तैजस्तो उनीहरू एकअर्कामा धेरै कुराको परिवर्तन चाहन्छन् । यस्ता परिवर्तन सम्भव हुन कठिन भएकाले उनीहरू दुवैलाई खिन्नता मात्र हात लाग्छ । पछि-पछि त उनीहरूलाई एकअर्काको सामीप्य पनि झिँजो लाग्न थाल्छ ।
विवाहपछि श्रीमान श्रीमती दुवै एकअर्कामा परिवर्तन आओस् भन्ने चाहन्छन् तर सँगै के पनि अचम्मलाग्दो कुरा छ भने कतिपय दम्पतीले भनेको सुनिन्छ- ‘तिमी पहिले त यस्तो थिएनौ, विवाहपछि तिम्रो व्यवहार निकै फेरिएको छ ।’ यसमा लुकेको गाँठी कुरो के भने विवाहपछि सँगै बस्न थालेपछि दम्पतीलाई एकअर्काको विषयमा थुप्रै
नयाँ कुरा थाहा हुन थाल्छ, जुन कुरा उनीहरूले विवाहअघि थाहा पाएका हुँदैनन् । जीवनसाथी अबेरसम्म सुत्नु, ढिलो गरी नुहाउनु, पछि गरौला नि भनेर काम पर सार्नु, बाह्य सम्बन्धलाई बढी महत्व दिनु, आफ्नो कोठा ताथ सामान लथालिंग राख्नु आदि जस्ता कुरामा जीवनसाथीबीच मनोमालिन्य हुन थाल्छ ।
कतिपय भने विवाहअघि सम्भावित जीवनसाथीलाई प्रभावित तुल्याउने उद्देश्यले त्यस्ता कामसमेत गरिदिन्छन् जुन कुरा कहिल्यै गर्दैनथे । फलस्वरूप विवाहपछि जब ऊ आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा फर्कन्छ त्यतिखेर जीवनसाथीलाई लाग्छ कि ऊ विवाहपछि बदलिएको छ ।
वामी परिवार युकेद्वारा मृगौला पिडित श्रीसको लागि उठाइएको रकम हस्तान्तरण
कौरव खत्रीको पुनर्जन्मको आठौ वर्ष,त्यो पीडालाई फर्केर हेर्दा……..